Udidi: Isitokhwe se-e-commerce
UPeter Thiel: uMtyalomali oPhambili
12 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 12 Novemba 2021
INTO OMELE UYAZI NGABARWEBI BENKOSI – ICANDELO 1
"Enye yeemfihlo ezimbalwa abazaziyo kwaye bambalwa abazisebenzisayo xa kuziwa kwimpumelelo yorhwebo kukuba kufuneka ukukhathalele ngokwenene ukwenza kakuhle. Kwezi ntsuku, ndibona uninzi lwabarhwebi bengakhathali ngokwaneleyo, bengakubeki phambili ukufunda malunga nokurhweba, kwaye besenza izizathu ezibuthathaka. ” – UChris Tate
Igama: Peter Thiel
Umhla wokuzalwa: ngo-Oktobha 11, 1967
Ubuzwe: eJamani, eMelika
Umsebenzi: usomashishini kunye nomtyali-mali
UPeter wazalelwa eJamani, kodwa abazali bakhe bamthabatha bamsa eUnited States, apho bazinza khona. Ufunde ifilosofi kwiYunivesithi yaseStanford, wafumana iBA (1989). Ukwafumene iJD yakhe kwiSikolo soMthetho saseStanford (1992). Wayeyincutshe ekudlaleni ichess, de wade wafumana udidi lweChess Master.
Ekunye noElon Musk kunye noMax Levchin, waseka iPaypal. Waseka iPalantir, esebenza njengosihlalo wayo. Wayengumtyalo-mali wokuqala wangaphandle kwi-Facebook, efumana isibonda esasixabisa i-10.2% kwi-2004 ye-500,000 yeedola. Ngoko ke ulilungu lebhodi yabalawuli.
Wongamela i-hedge fund ebizwa ngokuba yiClarium Capital. Le ngxowa-mali ibixabisa i-700 yezigidi zeerandi. Ukwaliqabane elilawulayo kwi-Founders Fund, inkampani ebixabisa i-2 yeebhiliyoni zeedola. Kwakhona waseka, usihlalo weMithril Capital Management kunye neValar Ventures.
Ngonyaka ka-2011, isikhundla sakhe kwiForbes 400 sasingama-293, sixabisa i-1.5 yeebhiliyoni zeedola. Ukususela ngo-Agasti 2015, wayexabisa i-3.3 yeebhiliyoni zeedola.
UPetros unomdla kweminye imiba ebangel’ umdla, oonobangela neengcinga zekamva, ukuthatha inxaxheba kweminye yazo, exhasa ngezimali eminye yayo kwaye ekhuthaza eminye yayo. Uphumelele iimbasa, ihonours, kunye nesidanga sewonga kwiUniversidad Francisco Marroquin.
Oko Kufuneka Ukwazi:
1. UPetros ngokwenene une-Midas touch. Ngaba uyaphumelela kwezinye iinkalo zobomi? Unokufuna ukuzama ukurhweba kunye / okanye ukutyala imali. Mhlawumbi impumelelo yakho kwezinye iindawo inokuguqulelwa kwimpumelelo ekurhwebeni nayo. Njengoko ubona, uPeter Thiel uye waphumelela kuninzi lwamanyathelo awathathayo, kuquka utyalo-mali. Wachaza ngokuchanekileyo ubuthathaka be-USD ngonyaka we-2003, kunye nokubikezela ukuba amandla e-USD kunye namandla aya kuba namandla ngonyaka we-2005.
2. Awunakusoloko ulungile. UPetros wayengasoloko enyanisile. I-hedge fund yakhe, iClarium, yehla kwixabiso kwiminyaka ka-2008 - 2011. Oku kubangelwe kakhulu kubhejo olungachanekanga. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uphumelele ngokubanzi, kanye njengoPetros.
3. Ekurhwebeni, isibindi sibaluleke ngaphezu kobuqili. Abarhwebi abaqaqambileyo banqabile. Akumangalisi ukuba kukho abantu abaninzi abangaphumelelanga.
4. UPeter uthi imonopoly yimeko yeshishini ngalinye eliphumelelayo. Oku kungasetyenziswa ekurhwebeni. Kufuneka uphuhlise indlela yakho yorhwebo ekhethekileyo kwaye unamathele kuyo. Loo ndlela yokurhweba yodwa ngumda wakho, oya kukunika impumelelo apho izigidi ezininzi zabarhwebi zinokuphupha kuphela.
5. Akukho mntu ukukhathaleleyo ngaphandle kokuba ube ngumrhwebi ophumeleleyo kunye neminyaka yerekhodi entle. Inzuzo engaguqukiyo yinto enzima, kwaye xa unokuyifeza loo nto, abantu abaninzi ngakumbi baya kuba nomdla kuwe, kuba uya kubonakala wahlukile. Ngaphandle koku, uya kufana nezinye izigidi zabantu abangaphumeleliyo.
6. Musa ukoyika ukubhabha ebusweni bobulumko obuqhelekileyo bokurhweba. Indlela yakho yokurhweba ilungile logama nje yenza imali, kungakhathaliseki ukuba kubonakala kungaqhelekanga kangakanani.
7. Ngalo lonke ixesha uqinisekisa ukuba ngekota okanye ngonyaka, wenza inzuzo ephakathi enkulu kunelahleko ephakathi. Abaphumeleleyo bakho abambalwa kufuneka babuyekeze abo baphulukene nawe abaninzi.
Isiphelo: Xa kuvela iingxaki kunye nemingeni kumsebenzi wakho wokurhweba, ngaba uziva uxinezelekile? Andisaziva ndingento yanto kwaye ndingenathemba. Namhlanje, ndingatsho ngokwenene ukuba ndonwabile njengomthengisi, nangona ngaphambili andizange ndiyicinge ukuba inokwenzeka, ngoku ndivakalelwa kukuba ndinokunceda abanye.
Esi siqwenga siphela ngesicatshulwa sikaPetros:
"Eyona nto ichasene nayo yonke into ayikokuchasa isihlwele kodwa kukuzicingela."
Eyokuqala ipapashwe kwi IADVFN
tags Abatyali, UMrhwebi oMkhulu, Peter Thiel
Ungabalunga njani kushishino lokukhetha
13 Agasti 2021 | Ukuhlaziywa: 13 Agasti 2021
Wonke umntu ufuna ukuqonda ubugcisa bobuchwephesha bokhetho. Emva kokunyathela unyawo kwihlabathi lokurhweba, abantu baqala ukucinga ukuba ukhetho lokurhweba yeyona ndlela isebenzayo yokwenza inzuzo enkulu. Le ngxelo iyinyani kwinqanaba elithile xa ungenayo imali enkulu. Unokuqikelela ulwalathiso lwexabiso lexesha elifutshane kwaye ulawule inzuzo efanelekileyo. Ke, ixesha libaluleke kakhulu kwimpumelelo yakho kwintengiso yezorhwebo.
Abathengisi abaninzi abasakhasayo bahlala becinga ngokuqikelela ulwalathiso lweemarike ngumsebenzi olula. Kodwa kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Ukwenza isigqibo esifanelekileyo kurhwebo, kuya kufuneka ulumke kakhulu ngenkqubo yokurhweba iyonke.
Phucula uqeqesho lwakho
Ukuthengisa ixesha eliphantsi, kufanelekile uqeqeshwe kakhulu. Ukuba wophula imigaqo eqhelekileyo yokuthengisa, akufuneki uzame ukurhweba ngeendlela zokuthengisa. Abathengisi abaninzi abasakhasayo bacinga ukuba bayazi yonke into malunga nemarike. Kodwa ukuba uvavanya ngononophelo isenzo sabarhwebi be-rookie, uya kuqaphela ukuba abazi kwanto malunga nale ntengiso. Ukuze ube ngumhle kwezorhwebo, umrhwebi kufuneka alandele imigaqo ephambili yeshishini lotyalo-mali. Kwaye ngenxa yoko, kufuneka baphucule uqeqesho lwabo. Kungathatha ixesha ukuba ube ngumrhwebi oqeqeshiweyo kodwa nje ukuba baqeqeshwe ngenkqubo yokuphunyezwa korhwebo, yinto nje yexesha lokuba baqale ukwenza inzuzo enkulu.
Abarhwebi abanokhetho lobuchwephesha bahlala bethengisa kunye nomkhwa okhoyo. Abazange babheje ngokuchasene nomkhwa okhoyo kuba bayazi ukuba yindlela eyingozi kakhulu. Ke, funda malunga nezigaba ezahlukeneyo zendlela yentengiso ukuze ukwazi ukuthatha izigqibo ezingcono ngaphandle kokufumana iimpazamo ezinkulu. Thatha ixesha lakho ufunde ukuvavanya izigaba ezahlukeneyo zendlela kunye nenqanaba lokulumkisa eligqithisileyo. Nje ukuba ube ulungile ekulawuleni urhwebo, awusayi koyika ukurhweba ukhetho lokurhweba ishishini. Ke, thatha ixesha lakho kwaye ufunde ukuvavanya imeko kwiakhawunti yedemo. Qiniseka kwindlela yokurhweba ngaphambi kokuba uqale ukuthatha urhwebo kwintengiso yokwenyani.
Funda iphatheni lesibane
Ukuthatha urhwebo ngexesha elisezantsi, kuya kufuneka ufunde ukuvavanya iphatheni lesibane. Isicwangciso sokurhweba ngesibane sekhandlela sisebenza kakhulu kwinkqubo yokuphunyezwa korhwebo. Funda iphatheni lesibane esinye kwinqanaba lokuqala kwaye wakuba uqinisekile ngenkqubo yokuphumeza urhwebo, kuya kufuneka ukhululeke kwindlela yorhwebo. Zama ukuthatha ixesha lakho kwaye ufunde ukuvavanya idatha yeemarike ngokuchanekileyo. Ulibale malunga nendlela enoburharha kunye nezalathi. Ngokufunda nje Hlalutya iphatheni yesibane, kufuneka uzithembe ngezenzo zakho.
Urhwebo ngaphandle kweemvakalelo
Ukuba ngumrhwebi onokukhetha, awusoze urhwebe ngeemarike. Iimvakalelo ziyabulala kakhulu kwinkqubo yokwenziwa korhwebo. Unokuba nolwazi olubanzi malunga nale marike kodwa ukuba uyasilela ukuvavanya iprofayili yomngcipheko ngendlela esemgangathweni, uya kusilela ukwenza urhwebo olukumgangatho ophezulu. Thatha ixesha lakho kwaye ufunde ukulawula iimvakalelo zakho. Ukuba uyabawela kwaye ujonge kwisicwangciso sokurhweba esinomngcipheko omkhulu, unokwenza inzuzo enkulu kodwa ekuhambeni kwexesha, uya kuphulukana nemali. Ungaze ukhathazeke emva kokuphulukana nemisebenzi embalwa. Cinga ngelahleko njengenxalenye yeshishini lakho lokurhweba kwaye uzame ukuvavanya iprofayili yomngcipheko ngendlela esemgangathweni.
Funda ukusebenzisa umndilili ohambahambayo
Kwindlela yokurhweba ngokukhetha, ukusetyenziswa komndilili wokuhamba kubaluleke kakhulu. Uninzi lwabarhwebi abaphumeleleyo baxhomekeke kumndilili wokuhamba ukuze baphumeze urhwebo ngenqanaba eliphezulu lokuchaneka. Thatha ixesha lakho ufunde ukujongana namandla okuthengisa ngendlela eyakhiwe ngayo. Nje ukuba ube ulungile kuvavanyo lokufundwa kwedatha ukusuka kumndilili ohambahambayo, unokurhweba kwisakhelo sexesha elingu-1. Qaphela ukuba ukuhamba kuya kukubonelela ngolwazi olubalulekileyo malunga nenkxaso kunye nenqanaba lokumelana.
tags kwiimarike, iinketho Trading, Ishishini lokurhweba
15 Juni 2021 | Ukuhlaziywa: 18 Juni 2021
Yintoni ekufuneka wonke umntu ayazi malunga nokuTyala imali?
2 Juni 2021 | Ukuhlaziywa: 3 Juni 2021
Ngaphambi kokwenza nasiphi na isigqibo malunga notyalomali, uyazi okanye ungazi, kuya kufuneka uzibuze imibuzo emithathu. Enye kukuba imali yakho ibiya kukhuseleka. Okwesibini kukuba ungayibuyisa imali yakho xa uyidinga, kwaye eyokugqibela yeyokubuyela oya kuyifumana kuyo. Le mibuzo imalunga nenxalenye ezintathu zotyalo-mali: ukhuseleko, ukuhlawula amatyala kunye nembuyekezo. Nazi izinto ekufuneka ukhathazekile ngazo ngelixa uhamba ngeendaba zokutshala imali kwaye ujonge i-asethi enenzuzo yokutyala imali kuyo.
Gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka uthathele ingqalelo zontathu izinto ngaxeshanye. Masibone ukuba inokuba yintoni iziphumo xa ujonge enye. Ukuba emva kokhetho oluninzi kulunge kakhulu, kungcono ke ukuba ugcine imali kwilokhari okanye kugcino lwakho okanye kwiakhawunti yangoku. Nangona kunjalo, xa ilixesha lokuthathela ingqalelo into enokunika eyona mbuyekezo iphezulu, ukungqubana kuyavela. Kwiimeko ezininzi, utyalo-mali kunye nembuyekezo efanelekileyo ayiboneleli ngokhuseleko oluphezulu okanye ukuthengiswa kwemali.
Njengoko sele uqondile, ukutyala imali kuyakunyanzela ukuba wenze urhwebo. Xa utyala imali kwizindlu nomhlaba, urhweba ngorhwebo. Ngokutyala imali esitokisini, uthatha umngcipheko wentengiso kwaye urhweba ngokhuseleko. Xa usiya kwidiphozithi esisigxina, urhweba ngembuyekezo ephezulu.
Zintathu iindlela ezibanzi ekukhetheni imali: imali, ii-equity, kunye neebond. Imali yeyona ikhuselekileyo kwaye ikwalulwelo kakhulu kodwa imbuyekezo iphantsi kakhulu. Iibhondi okanye umvuzo osisigxina okanye ityala lizisa umngcipheko ophakathi kwaye alulwelo oluninzi, kodwa lubonelela ngembuyekezo engcono xa kuthelekiswa nemali. I-equities inobungozi obuphezulu kodwa kulula ukufumana ukuthengiswa kwiimarike.
Imbuyekezo kulindeleke ukuba ibe ngaphezulu kuneemali okanye iibhondi. Ngaphakathi kwezi klasi zintathu, unokuxhomekeka ngakumbi kwiiklasi ezingaphantsi. Iimali zotywala zilungile njengekheshi kodwa zibonelela ngembuyekezo engcono kunemali egcinwe ebhankini. Iibhondi zikarhulumente zinamanzi kwaye zikhuselekile kuneebhondi ezihlanganisiweyo, kodwa zibonelela ngembuyekezo esezantsi kunale yokugqibela. Ingxowa mali eyahlukeneyo iyahluka xa ithelekiswa nokutyala imali kwiitokhwe ezimbalwa okanye kwingxowa mali yecandelo.
Ke, kufuneka ukhethe ntoni kutyalo mali?
Impendulo ixhomekeke kwiinjongo zakho zemali. Ke, kuqala qonda iinjongo zakho, kwaye uvavanye ixesha elikhoyo lotyalo-mali lwakho ukuze lusebenze kunye nembuyekezo oyifunayo ukuze uhlangane neenjongo zakho. Ukhetho lwakho lotyalo-mali luya kugqitywa ngokusekwe kwezi zinto zintathu. Iphothifoliyo elungileyo yotyalo-mali yenza ukuba izinto ezintathu ezibalulekileyo zifumane iinjongo zezemali kunye nokwakha ubutyebi.
Ngaphandle kokwazi indlela yokukhetha utyalo-mali lwakho, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwiimpazamo eziqhelekileyo zotyalo-mali. Ukuthintela ukwenza ezo mpazamo, zazi ukuba ziyintoni:
Impazamo 1: Ukunganikeli ngqalelo kulwabiwo lweasethi
Uninzi lotyalo-mali olungacwangciswanga ngokusekwe kwiingcebiso ezivela kusapho kunye nabahlobo yile nto uyakha ipotifoliyo yakho yotyalo-mali. Ke, umntu ufumana iidipozithi ezahlukeneyo ezisisigxina, ukubuyela kwemali kunye nemigaqo-nkqubo yeinshurensi yokunikezela, iimali ezihlangeneyo okanye izitokhwe. Nangona kunjalo, ayisosigqibo sobulumko sokutyala imali kuzo zonke ezi zinto. Unokucinga ukuba utyala imali efanelekileyo kwiindawo ezifanelekileyo, kodwa zonke iindlela onokukhetha ukuzenza azinakulunga kuwe. Kubalulekile ukuqaphela iinyani ezinje ngeminyaka yakho, iasethi yezemali, kunye nokunye. Ulwabiwo lweasethi sesona sixhobo sikhulu somtyali mali ukwenza ubutyebi.
Impazamo 2: Ukubala imisebenzi emininzi njengesicwangciso sotyalo mali
Abatyalomali abaninzi abancinci baphatha iimarike zentengiso njengohlobo lomatshini weroulette ukwenza imali. Nangona kunjalo, ibenza balahlekelwe yimali. Ayibobulumko ukuba uthenge iseti entsha yeemali ezihlangeneyo inyanga nenyanga njengoko ibangela ukwahluka-hlukana. Akunangqondo ukongeza enye imveliso endaweni yokuxhasa iimveliso eziphumeleleyo kwipotifoliyo yakho esele ikho. Ukuba ufumanisa ukuba uchitha ixesha elininzi notyalo-mali lwakho, ngokuqinisekileyo kukho into engalunganga kwaye kufuneka ufumane isicwangciso-qhinga sakho sokutyala ngokufanelekileyo.
Njengesikhokelo esibanzi, unokuba neenjongo zexesha elide zokuxhamla kumxube we-equity kunye neebond, ngelixa iinjongo zexesha elifutshane zikhathalelwa ngcono yimali ezinkozo okanye utyalo-mali. Ayikuko ukuba iinjongo zezemali azinakufezekiswa ngokutyala imali kwiidiphozithi okanye kwisitokhwe esimiselweyo. Icala elisezantsi kuphela kukuba kungafuneka usebenze nzima ngakumbi kolu tyalo mali. Ngokubanzi, ukuba kukhulu kakhulu ukuba uthathe isigqibo, unokuhlala unxibelelana nomcebisi wakho wotyalo mali.
tags ulwabiwo lweempahla, Iibhondi ezihlanganisiweyo, Iibhondi zikarhulumente, Investment
Yeka ukwenza okungasebenzi kuwe njengomrhwebi
13 April 2021 | Ukuhlaziywa: 13 April 2021
Xa iMarike ihamba
Ukuzuza kwenziwa kuphela xa ixabiso lihamba. Akukho ntshukumo yamaxabiso; akukho nzuzo. Ngelixa singenakuqiniseka ngevolthi elandelayo yentengiso kunye nokungazinzi, kukho imigaqo enokusinceda ukuba sifezekise iinjongo zethu, nokuba zenziwa yintoni na iimarike.
Nika ingqalelo ekuthengeni nasekuthengiseni uxinzelelo, ngokunxulumene nokuhamba kwexabiso kunye nokuthambeka okukhulu kwimarike. Iintshukumo zeManiacal zihlala zilandelwa kukuthenga ngamandla kunye nokuthengisa uxinzelelo. Nangaliphi na ixesha ixabiso liya kwenye indawo ngokufutshane kwaye emva koko litshintshe indlela ngequbuliso, oko kuthetha ukuba inzuzo ithathwa ngabaninzi bexesha elifutshane.
Xa uthengisa ixesha elide, jonga ukukhula kweemarike njengoko kukhula ngokuhamba kwexesha. Isixhobo sokurhweba esiwela ngeepips ezingama-800 ngeentsuku ezi-3, emva koko sithathe iintsuku ezi-6 ukufumana iipipi ezingama-400, ngokungathandabuzekiyo, siza kuphinda sibuyele phantsi, kunye nokudibanisa kunokuhla ngaphezulu, ngaphantsi kwezantsi.
Kukho imigaqo yegolide ekufuneka ilandelwe ngabo bonke abathengisi abaphumeleleyo, ngakumbi abo banqwenela impumelelo yexesha elide.
Wenze malini kunyaka ophelileyo? Zingaphi iirhafu ozenzileyo kwiiphothifoliyo zakho zorhwebo? Ngaba urhoxile ngaphezu kokufaka kwakho xa uwonke? Thembeka kuwe kwaye ujonge iziphumo zakho zokurhweba.
Masibize indibano ebalulekileyo. Ngaba uluthandile uhlobo lweziphumo ozifumeneyo kunyaka ophelileyo, njengomrhwebi? Ngaba ungaze ufune ukuba iziphumo ezinjalo ziphindwe kulo nyaka? Ngaba ufuna iziphumo ezingcono kulo nyaka okanye ufuna ukuqhubeka ngoluhlobo? Cinga malunga nokuba usebenze ixesha elingakanani. Ngaba unebhongo lokuzibiza ngokuba ungumrhwebi? Ukurhweba kunzima: Kodwa ngaba uyifumene indlela yokufumana inzuzo rhoqo?
Ukuguqula imikhwa yokurhweba eyonakalisayo
Wenza ntoni ngoku engakuniki iziphumo ozifunayo? Lixesha eliphezulu ukuba ulahle naziphi na iindlela zorhwebo okanye imikhwa engakunika iziphumo ozifunayo.
Ukuba ukubeka emngciphekweni ubukhulu beqashiso eliphezulu (xa kuthelekiswa nebhalansi yeakhawunti yakho) kukuchaphazela kakhulu, yeka loo nto kwaye uqale ukubeka umngcipheko kwixabiso eliphantsi kurhwebo ngalunye. Ukuba ukwala ukusebenzisa ukuyeka ngamanye amaxesha ucima inzuzo oyifumene ngaphezulu kweeveki okanye iinyanga, emva koko usebenzise indawo yokumisa. Ukuba uyakuthanda ukuthatha urhwebo oluninzi oludla ngokudlula kwiakhawunti yakho, nceda uyeke kwaye uqale ukuthatha amashishini ambalwa kodwa akumgangatho ophezulu. Ukuba utyeshela ukophula imithetho elungileyo yokurhweba, uhlala ukwenzakalisa, kuya kufuneka ufumane iindlela zokubambelela kule mithetho ilungileyo, nokuba kunjani. Unamathela kubo ngokungathi ubukho bakho buxhomekeke kubo.
Nantoni na oyenzayo, echaphazela impilo yephothifoliyo yakho, nceda kwaye ndiyakucela, ndiyakubongoza ukuba uyeke ukuyenza, kwaye uqale ngokwenza ngokuchaseneyo. Uya kumangaliswa ziziphumo ezilungileyo ozibonayo emva koko.
Apha, ndingathanda ukuphinda inqaku lam lokugqibela kwimagazini yabarhwebi (ngoSeptemba 9, 2011)
“Kuza kubakho imiceli mngeni kubomi bakho bokurhweba obuya kukwahlula kwiinjongo zakho zokurhweba kuphela ukuba uyabavumela. Impumelelo yokurhweba ayibobuzibulo babambalwa abanelungelo. Impumelelo yokurhweba yeyam, impumelelo yorhwebo yeyakho. Impumelelo yorhwebo yeyabo bayifunayo, kunye nabo baphulukana nayo ngoku. Kungenxa yabo banikezele ngorhwebo, nakwabo basaza kuqala ukuthengisa.
Umyalezo ucacile: Impumelelo yorhwebo yeyomntu wonke. ”
Izitampu.com kukuthengwa kwexesha elide kula maxabiso abethiweyo
4 Matshi 2021 | Ukuhlaziywa: 4 Matshi 2021
Inkampani yaseMelika ethutha kunye nezisombululo zokuhambisa iStamp.com (SMTP) yaxela umvuzo obabazekayo phakathi kuFebruwari kodwa izabelo nangona kunjalo zehla nge-19%.
Ukulungiswa komvuzo wekota yesine ngesabelo ngasinye kungene nge-4.13 yeedola, phantse iingqikelelo zabahlalutyi eziphindwe kabini ze- $ 2.62.
Ewe kunjalo, nokuba yeyiphi na imilinganiselo yokulinganisa oyikhethayo ukulinganisa ifemi kuyo, iphakathi kwabona basebenza kakuhle kushishino lwayo (isoftware kunye neenkonzo zeIT).
Ixabiso lokubhukisha liyi-3.61, ixabiso kwintengiso kwi-4.63 kunye nexabiso lamashishini kwi-EBITDA kwi-13.77, ikwindawo ye-40 kwishishini ngaphandle kwe-239.
Ixabiso lesabelo lehle ukusuka kwi- $ 260 ngomhla wokukhutshwa komvuzo uye kwi-181 ephantsi nge-26 kaFebruwari. Ukopha akuyekanga. Ngexesha lokubhala isitokhwe sisezantsi nge-4.7%, siphinda sivavanye ixesha eliphantsi.
Abathengisi bakuthiyile ukungathandabuzeki, ke xa inkampani inqabile ukunika isikhokelo sokuhamba nengxelo yomvuzo, kwahlangatyezwana nempendulo efanayo ebonwe ngabatyali mali kwenye indawo - thengisa, thengisa, thengisa.
Iitampu.com (SMTP) itshathi yosuku olu-1, nge-4 Matshi 2021. Ukuthengisa ngononophelo
Nangona inkampani ingakhange ibonise ukuba icinga ukuba ingeniso ayinakubambelela ngelixa inkampani ihamba ngaphaya kwesifo, kodwa ithi kukho "ukungaqiniseki okukhulu ngo-2021".
Uluvo olubi luye lwangqinelana ngokuthe ngqo nokuthengisa ngokubanzi kwizitokhwe zetekhnoloji njengoko abatyali mali ukuya kwinqanaba elithile bejikeleza kubathengi.
Nangona kunjalo, ngoLwesibini inkampani ibhengeze ukuba isiphindaphinde isabelo sayo Inkqubo yokubuyisela kwi- $ 120 yezigidi, Senze intengiselwano nge-26 kaFebruwari- kodwa oko akuncedanga ekuphakamiseni imeko.
Stamp.com's ukuqhuma kwemali
Masikhe singene nzulu kwezi ziphumo zomvuzo.
Ingeniso ye-Stamp.com yatsibela i-758 yezigidi zeedola kumbono wokuphela konyaka, yokuphucula iipesenti ezingama-33. Ngokuqinisekileyo, iikhomputha zokukhula bezisezantsi kancinci ngonyaka kunyaka wesithathu ukuya kwikota yesine (42% xa kuthelekiswa nama-28%).
Ukuba sijonga inani le-4Q ye-GAAP eps ibingcono nangakumbi kunenani elihlengahlengisiweyo, inyuke nge-108% ngonyaka ($ 2.36).
Inani labathengi lenyuke nge-25% ukuya kwi-1.02 yezigidi ngonyaka ngonyaka kwi-Q4 nayo.
Le asiyinkampani yokukhula enabathengi abaninzi kodwa kungekho nzuzo-iphindeneyo.
Ngoku makhe sihlolisise ishishini ngokwalo. Inkampani ine-clutch yeempawu ezisebenza kuyo: Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks kunye ne-ShippingEasy.
Kuyavunywa ukuba okuninzi kokusebenza kwayo okwangoku kupheleliselwe e-US kodwa oku kufanele kubonwe njengokulungileyo kunikwe amathuba okwandiswa kwamazwe oku kuyavuleka.
Ngokucacileyo kukho abathathi-nxaxheba kwimarike abagqibe ekubeni ukutsiba phambili kwe-e-commerce kugutyungelwe lixabiso, kungekho nto ingako inokubakho. Ewe kunjalo, baya kubonakala bethengisa ngesiseko sokuba ukusebenza kwe-2020 ngekhe kuphindwe kwi-2021, nokuba inkampani ixhomekeke kubo bonke abathengi abatsha ebabambileyo.
Thenga iiStamp.com (SMTP) kwi-eToro nge-0% yekhomishini
Ixabiso eliphantsi lokwanda
Iitampu.com zithatha ikakhulu amashishini amancinci naphakathi kwaye umnikelo wawo unexabiso eliphantsi, ulungele kwaye ubhetyebhetye. Ngendlela efanayo eyathi kwiminyaka embalwa edlulileyo abanye bahlekisa ngezisombululo zeshopify zikaShopify, iya kuba yimpazamo ukujongela phantsi ukunamathela kweemveliso zayo.
Thatha indawo yokuhambisa ngenqanawa umzekelo. Iza njengeplagi yeWordPress eyenza ukuba ifikeleleke ngokulula kwizigidi zamashishini amancinci ngokoqobo. Malunga nesiqingatha seziza ezikwi-intanethi zakhiwe kwiqonga leWordPress.
Inkonzo iyenza ibe yimpepho yokucwangcisa kunye nokulawula uluhlu lweempahla kunye nokuthumela iimpahla, apho amashishini anokuqhagamshela kunye nabathumeli abohlukeneyo, ukusuka eHermes ukuya kwiRoyal Mail okanye kwimeko ye-US, i-US Postal Service (USPS).
Iimpawu zeStamp.com kunye ne-Endicia, sisisombululo se-USPS kuphela sokuthumela kunye nokuthumela iipakeji. Njengokuthunyelwa kwenqanawa kunye nabasebenzisi bayakwazi ukuprinta ukuposa ngekhompyuter ngokuthe ngqo kwiimvulophu, iilebhile okanye iphepha elicacileyo elinekhompyuter kunye nomshicileli oqhelekileyo.
Ke ngoko iindleko ezisecaleni zokufumana abathengi abatsha ke ziphantsi kakhulu kwiStamp.com.
Iitampu.com zinamanqaku ePiotroski F angama-7 kwayi-9, ebonisa ukuba inephepha lomncono elisempilweni, ngaphandle kwetyala kunye nezigidi ezingama- $ 433 eziinkozo ezandleni.
Ukusuka kwimbono esemgangathweni yokubuya kwi-equity inomdla kwi-21.8% kunye ne-P / E yayo ye-2020 yayinama-20 kwaye uqikelelo lwalo nyaka lunge-24.2, luyenza ukuba ibe nexabiso elifanelekileyo.
Kuqingqo-maxabiso kunye nomgangatho kuphela zizinto zonke ezithengiswayo imiqondiso yesitokhwe.
Esi sitokhwe sisixhobo sokukhwaza esiguqukayo nesibonisayo njengendawo yokungena ebalaseleyo. Nangona kunjalo, ukungazinzi okwangoku kwi-Nasdaq kuthetha ukuba abatyali-mali abanomdla wokufumana ukubhengeza banokufuna ukubiza ixabiso eliphakathi.
Thenga iiStamp.com ngaphandle kwekhomishini kwi-eToro
tags eCommerce, Izitampu.com
Iingcebiso ezixabisekileyo kubarhwebi beRookie zeForex
21 January 2021 | Ukuhlaziywa: 21 January 2021
Okutsha kujongana neentlobo ezahlukeneyo zeengxaki njengoko engazi kakuhle kwimarike. Xa abarhwebi bengayiqondi kakuhle imakethi, abayi kukwazi ukuthatha inyathelo elifanelekileyo ngokuxhomekeke kwimeko. Ke, njengokuhlaziya, ufuna iingcebiso ezithile kwiingcali ukuze ukwazi ukulawula ishishini lakho ngokufanelekileyo. Kwimarike ye-Forex, umntu kufuneka awuphathe ngokufanelekileyo umngcipheko ngokuthatha isigqibo esifanelekileyo. Kukho iingcebiso ezibalulekileyo kubatyali mali abatsha ekuxoxwa ngazo apha.
Abantu kufuneka balawule umngcipheko wokuphuhlisa ibhalansi yeakhawunti. Umtyalomali kufuneka abeke ilahleko yokumisa kwaye athathe inzuzo kwindawo efanelekileyo ukuze athintele ukubakho kwelahleko enkulu. Okokuqala, umntu kufuneka enze njalo zichonge ukunyamezelana nomngcipheko ukuze akwazi ukuchaza inani lomngcipheko. Abantu akufuneki bathathe umngcipheko omkhulu benethemba lokufumana inzuzo engaphezulu. Oku kuxhomekeke ngokupheleleyo kwinkunzi yomtyali mali. Iingcali zikhetha ukuthatha umngcipheko ongekho ngaphezulu kwe-2% yomngcipheko wediphozithi kurhwebo ngalunye. Kuya kufuneka uzame ukonyusa umvuzo ukwenza urhwebo ngakumbi.
Khetha uMcebisi olungileyo
Umcebisi olungileyo unokubonisa indlela elungileyo yorhwebo ebaluleke kakhulu kubatyali mali abatsha. Isikakhulu, abo bafikayo baziva beswele isikhokelo esifanelekileyo. Ke, bafuna umcebisi osebenzayo onokuthi abanike iingcebiso ezilungileyo kwaye abakhuthaze ukuba benze kakuhle kwimarike. Umtyalomali ngamnye unesitayile sakhe. Akufanele atshintshe isitayela sabo ngenxa yomcebisi wakhe. Kwiimarike ze-Forex, umrhwebi kufuneka enze indawo eqinile ngokubonisa isitayela sakhe esisodwa. Nje ukuba wazi ukurhweba njengepro, Sebenzisa iqonga lokurhweba elifanelekileyo ukusuka eRakuten Australia. Ngokusebenzisa iqonga leprimiyamu, ungathatha isigqibo esingcono kwaye ekugqibeleni uphucule inkqubo yokwenza ngexesha elifutshane.
Zuza ulwazi malunga neNtengiso
Oosomashishini kufuneka bafumane ukuqonda okufanelekileyo malunga neemeko ezahlukeneyo zentengiso. Zininzi izinto ezinxulumene nemarike. Ixabiso lesibini semali sinokutshintsha nangaliphi na ixesha ngokusekwe kwizinto eziguquguqukayo. Ke, okuhlaziyayo kufuneka kufundwe ngayo yonke into yentengiso enefuthe ekuhambeni kwamaxabiso. Ukuchonga imeko, umntu kufuneka aqokelele ulwazi malunga Ukusetyenziswa kwezalathi-nkqubela. Kwelinye icala, ukuze azi malunga nezinto ezincinci zoqoqosho, kufuneka azi malunga nohlalutyo olusisiseko.
Uninzi lwexesha, abafikayo kufuneka balawule imvakalelo njengoko bengaphenduli ngemeko leyo. Abantu kufuneka bathathe isigqibo esifanelekileyo sokulawula iingxaki zengqondo. Abarhwebi bayafuneka ukufumana ezinye iimulsions zale mvakalelo. Okokuqala, umntu kufuneka afumanise ukuba zeziphi iintlobo zezinto zengqondo ezivela ngexesha lokuthengisa, emva koko ufumane izisombululo koku. Xa umntu eza kukwazi ukwahlula iimvakalelo kwisigqibo sokurhweba, uya kuba nakho ukwenza ngempumelelo.
Gcina iSicwangciso esihle
Abaqalayo kufuneka bavelise ipani esebenzayo enokubanceda ukuba balawule ishishini ngokuchanekileyo. Abantu baphuhlisa isicwangciso ngokujonga imeko yangoku kunye nezinto ezininzi ukuze bakwazi ukwenza oku ngokufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Ukuhlaziya kunokusebenzisa isicwangciso esiliqili okanye kunokusebenzisa esinye isicwangciso esiqinisekisiweyo. Zombini zinokubonelela ngesiphumo esihle. Kodwa, ukwenza isicwangciso esitsha kuthatha ixesha. Ngakolunye uhlangothi, ngaphambi kokusebenzisa isicwangciso esiqinisekisiweyo, umtyalomali kufuneka enze utshintsho oluthile ngokusekelwe kwiimeko ezikhoyo.
Ukuba usomashishini omtsha angagcina ezi ngcebiso, uya kukwazi ukwenza isikhundla kumgca weengcali. Xa uza kulungelelanisa neendlela ezintsha, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukhetho lwakho.
tags Abacebisi abalungileyo, IRakuten Australia, Ukhuseleko lweRakuten, Rookies
I-Tritax Big Box Reit kunye ne-Segro ngabaphumeleleyo kwi-e-commerce
18 January 2021 | Ukuhlaziywa: 4 Agasti 2021
Sineengcebiso ezimbini zesitokhwe kwiveki ezayo, zombini kwicandelo lokugcina izindlu nomhlaba elikhulayo.
Phezulu kuluhlu lwethu yiTritax Big Box REIT (BBOX), ethe yenyuka nge-5% namhlanje, ilandelwa nguSegro (SGRO), oyena mntu ungumnini omkhulu wokugcina e-UK anepotifoliyo enkulu kwilizwekazi laseYurophu.
Kutheni iindawo zokugcina iimpahla? Ewe, phakathi kwabona baphumeleleyo kulo bhubhani ibe ngamaqonga e-commerce axhomekeke kugcino kunye neenkonzo zokuhanjiswa kweemayile zokugqibela.
Imarike iyaqaphela. I-BBOX inyuke nge-5% ngale ntsasa ukuya kwi-185p, kwaye iinkunzi zeenkomo kuya kufuneka ziqhubeke nokuqhuba kwiinyanga ezizayo njengokutshintsha kweefemu ezikwi-Intanethi.
NgoLwesine ophelileyo (nge-14 kaJanuwari) ibonelele intengiso ngohlaziyo lwamaxabiso kwipotifoliyo yayo yezixhobo zempahla nomhlaba.
Inkampani ithi unikezelo olunyanzelekileyo kunye nemfuno yabahlali bezakhiwo ezinkulu, zidityaniswe nento eyichaza njenge "ntengiso yotyalo-mali ekhuthazayo" yonyusa ixabiso kwiimpahla zayo eziphambili.
Ukusukela ngomhla wama-31 kuDisemba ukunyuka okufana nokunyuka kwamaxabiso kunyuke nge-8% kwisiqingatha sesibini ukusuka nge-30 kaJuni.
Ilindele i-European Public Real Estate Association ye-asethi ebonakalayo (i-metric yeshishini ebonisa ukuba ityala lihlehlisiwe ekucingeni ukuba amaziko e-REIT athengisa kwaye athengisa ii-asethi) ukubetha uqikelelo lwabahlalutyi, ukusuka ku-152p ukuya ku-166p ngabahlalutyi abathandathu, ngokomyinge we-159p.
I-BBOX ijolise 'kwibhokisi enkulu' yeempahla ezisemgangathweni ezingaphezulu kweenyawo ezingama-500,000 kuqeshiso lwexesha elide, elinokuba malunga neminyaka eli-12. Irente inokuphononongwa, kodwa ngokubheka phezulu kuphela, isenza ukuba iphothifoliyo yayo ibe nomtsalane kubatyali mali.
I-PE ezininzi zibonisa ukuba i-BBOX yinkampani elungileyo ngexabiso lesivumelwano
Isitokhwe siyarhweba kwi-PE emininzi ye-17 nje kodwa emva kwenyanga ezilishumi elinesibini (TTM) ukukhula kwe-EPS ngama-25%.
Kubatyalomali abafuna ithuba lokukhusela ukukhula kwemali kunye nengeniso, oku kunokuba yindawo ekhuselekileyo kodwa enenzuzo yokupaka imali yakho kwipotfoliyo elungeleleneyo. Ukwanda kolwahlulo kwakulindelwe nge-8% ngo-2020 kunye ne-6% ngowama-2021 (ngomhla wama-22 kweyeDwarha, kuhlawulwa ngomhla we-13 Novemba), kwi-TTM yangoku eyi-5.58p ngesabelo ngasinye.
Esi sisisitokhwe esikwizinga eliphezulu, esinomda osebenzayo we-141%, siyibeka kwindawo yesithoba kwezingama-57 iinkampani ezikwicandelo lokuhlala kunye nentengiso ye-REIT, kunye nembuyekezo kwi-equity ye-6.9%.
NgokukaNick Preston eTritax, umphathi wetrasti, "phantse wonke umtyali mali" wayejonge eli candelo. U-Preston wongeza athi: "Abatyali mali baseMpuma Ekude, amaziko aseYurophu [kunye] nabadlali bamashishini abucala abafuna ukuvezwa kweli candelo.
Abatyalomali kufuneka bazi ukuba usihlalo webhodi uSir Richard Jewson uthatha umhlala-phantsi kwi-AGM yenkampani elandelayo ngoMeyi 2021. UJewson wakhokela inkampani nge-IPO yayo ngo-2012.
Kwakhona, ngoDisemba iAberdeen Standard Investment yafumana inzala engama-60% kumphathi weTritax, kodwa iqela leBig Box "ligcina ukuzimela nokulawula izigqibo zotyalo-mali", utshilo uSir Richard ngelo xesha.
Ipotifoliyo yenkampani iyaqhubeka nokukhula, kunye nokufumana kwayo okona kutshanje kwenzeka ngoNovemba 2020, ngokuthengwa kwecandelo eliphambili lokulawulwa kobushushu obulawulwa kunxweme olusemazantsi eNgilane kwindawo "engundoqo".
Amaxabiso eSegro asetelwe ukukhutshwa
Abatyalomali abakhetha ukungathengi kwistokhwe esibonileyo ukuxabiseka kwemini enye kwaye sele bebetha abahlalutyi bexabiso lokuvumelana (176p), banokukhetha iSegro, egxila kwipotifoliyo yayo kwindawo yokugcina iimpahla. Ixele kwiveki ephelileyo ukuba iqokelele iipesenti ezingama-98 zerhafu kunyaka-mali ka-2020, ephele ngomhla wama-31 kuDisemba.
Kwikota yokuqala ifumene iipesenti ezingama-88 zeepawundi ezingama-63 ezihlawulwe kwangaphambili ngabaqeshi. Elo yayilinqanaba eliphezulu lokuqokelelwa kunokuba kubonwe ngexesha elihambelanayo kwikota nganye ezintathu ezidlulileyo.
Ixabiso lesabelo sikaSegro liphezulu nge-0.23% namhlanje ukuya kwi-963p. Ikwanomda wokusebenza onomtsalane, onyanisekileyo ophakamileyo kune-BBOX, oza nge-187%, ebeka kwindawo yesithathu kwicandelo lokuthengisa izindlu nomhlaba.
Ukukhula kwe-EPS kuye kwancipha nangona ukusukela nge2018, kodwa kuqikelelwa ukuba kulonyuswe kulo nyaka nge-10%.
I-Segro yinto ekhethwayo kwisivumelwano sokuba ixabiso lazo lihle kakhulu emva kwexesha, ke ukuthatha isikhundla kuxhomekeke ekucingeni ukuba intengiso iqala ukuqaphela indawo yayo ebalulekileyo kwindawo ye-e-yorhwebo e-Uk nakwiYurophu iphela.
Inepropathi yokugcinwa kwempahla kwimimandla ebalulekileyo yeLondon kunye neThames Valley kunye neenyawo ezinkulu eJamani, eFrance nasePoland. I-Segro inezinye iiyunithi zokugcina kunye nokukhanya kwemizi-mveliso eSpain, eNetherlands naseCzech Republic.
Iipropathi zenkampani zisetyenziselwa uluhlu olubanzi lwabathengi kumacandelo kubandakanya ukuthengisa, ukuhambisa iipasile, ezothutho, itekhnoloji, iinkonzo kunye nezixhobo. Into enomdla kukuba, iindawo zokugcina zigcina inani lisetyenziswa njengamaziko edatha, ukuzisa olunye uluhlu lokwahlukahlukana kwipotifoliyo yalo.
Ixabiso lokuvumelana lokuhlalutya li-1006p, i-4.34% yepremiyamu kwixabiso langoku.
tags eCommerce, izindlu ezithengiswayo, isiqingatha, tritax enkulu yebhokisi reit